Ogaden News Agency (ONA) – 54 askari oo ciidamada woyanaha ah oo lagu dilay goobo kala gadisan 25 August – 1 September
54 askari oo ciidamada woyanaha ah oo lagu dilay goobo kala gadisan 25 August – 1 September
Wararka naga soogaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo iyo weeraro lagu qaaday askarta mooraalka jabsan ee gumaysiga Ethiopia oo ka dhacay deegaano kamdi ah wadanka Ogaadeeniya, dagaaladaasi ayaa waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay askar farabadan waxayna udhacaeen.
29/08/2012 Deegaanka lagu magacaabo wayla-qanjidhle oo Sagag udhaw dagaal xoogbadan oo halkaasi kadhacay ayaa waxaa askarta daalan ee gumaysiga ethiopia lagag dilay 12 askari waxaana lagaga dhaawaxa 14kale.
30/08/12 isla deegaanka Wayla-qanjidhle oo magaalada Sagag udhow dagaal kadhacay ayaa waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay 6 askari waxaana lagaga dhaawacay 4kale.
30/08/2012 Deegaanka Duduma-qalan oo katirsan Magaalada Dhuxun weerar ay ku qaadeen NH/CWXO askar gumaysi oo halkaasi ku sugnayd ayaa waxaa weerarkasi lagaga dilay askarta gumaysiga ethiopia 10 askri waxaana lagaga dhaawacay 7 kale.
Deegaanka lagu magaacaabo Barmiilka oo dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay 2 askri.
25/08/2012 Magaalada Gabagabo dagaal ay ku qaadeen NH/CWXO askarta maxaysatada ah ee gumaysiga ethiopia oo kusugnayd deegaankaasi ayaa waxaa lagaga dilay askarta gumaysiga madaow 3 Askari.
28/08/2012 Magaalada Sagag Weerar ay ku qaadeen cutub katirsan NH/CWXO ayaa waxaa askarta gumasyiga ethiopia ee ku sugnayd magaaladaasi lagaga dilay 5askari waxaana lagag dhaawacay 7 kale.
29 iyo 30 /08/2012 laba dagaal oo ka dhacay Deegaanka lagu magacaabo Toora-naagood oo Magaalada Sagag udhow waxaa askarta gumaysiga lagaga dilay 7 askari waxaana lagaga dhaawacay 6 kale.
29/08/2012 Deegaanka Garba-diimo oo Baabil udhow dagaal kadhacay waxaa askarta gumayisga lagaga dilay 5 askari.
31/08/2012 Malayko dagaal ka dhacay waxaa askarta gumasyiga lagaga dilay 2Askri waxaana lagaga dhaawacay 4kale.
01/09/2012 Deegaanka lagu magacaabo Callaadka oo Magaalada Galaalshe udhow waxaa askarta gumasyiga lagaga dilay 2askari.